သင့်စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေမယ့် သမိုင်းထဲက သင်မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆယ်ပုံ အကြောင်း | Buzzy
သင့်စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေမယ့် သမိုင်းထဲက သင်မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆယ်ပုံ အကြောင်း
သင်မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဒီပုံဆယ်ပုံရဲ. အကြောင်းကို သိရရင် သင့်စိတ်ဟာ ထိတ်လန့်ကောင်း ထိတ်လန့်မိပါလိမ့်မယ်
1. A Man Testing A Bullet Proof Vest
သိပံစမ်းသပ်မှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘယ်သူကများ ဒီလိုစမ်းသပ်မှုကို ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ကိုင်ချင်စိတ် ရှိပါ့မလဲ ။ဒီပုံထဲမှာတော့ အစောပိုင်း ကျည်ကာအင်္ကျိစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်နေတာပါ ၊ပစ်တဲ့သူနဲ့ အပစ်ခံသူတို့က သူငယ်ချင်းတွေပါ ။
2. The Hindenburg As It Crashed
လေသဘောင်္ပျက်ကျမီးလောင်တဲ့ ဓါတ်ပုံအချို. ရှိပေမယ့် ၊ ဒီပုံကတော့ အခြားပုံတွေထက် ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ် ။
3. The Old Lady and the AK-47
ဒီပုံဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က အာမေနီးယားမှာ ရိုက်ကူးထားတာပါ ။ အသက်၁၀၆ နှစ်အရွယ် အဘွားအိုဟာ သူမကိုယ်သူမ ကာကွယ်ဖို့ လက်နက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားရတာပါ
4. The Baby Cage
၁၉၃၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက နယူးယောက်ခ်မြို.လို မြို.ကြီးတွေမှာ အထပ်မြင့်မှာ နေထိုင်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ.ကလေးငယ်တွေကို နေရောင်ခြည်ရရှိဖို့ ပုံထဲကလို လှောင်အိမ်တွေ သုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
5. The Disneyland Employee Cafeteria
ဒီပုံရိပ်ဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တုန်းက ဓါတ်ပုံဖြစ်ပြီး ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်လှပါတယ် ၊ ဒီပုံထဲမှာ Disney ကအလုပ်သမားတွေဟာ ကန်တင်းမှာ စားသောက်နေကြပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
6. The Advertisement That Will Stick With You
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဆေးကြေငြာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
7. The Original Ronald McDonald
သင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ရဲ. Ronald McDonald ဟာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီပုံကတော့ ၁၉၆၃ ခုနှစ်က McDonald ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူရဲ. ပုံပါတဲ့ ။
8. The Hippo PullingaCart
မြင်းဆွဲတဲ့ ရထား ၊ နွားဆွဲတဲ့ ရထားတွေ မြင်ဖူးကြမှာပါ ၊ ဒါကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ
9. A Young Charlie Chaplin
ကျွန်တော်တို့ မြင်ဖူးတဲ့ ချာလီချာပလင် မင်းသားကြီးဟာ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ပါ ၊ ဒီဓါတ်ပုံထဲက ချာလီချာပလင်ကတော့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ၁၉၁၆ က ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံပါ
10. Woman Walking Baby In Gas Proof Carriage
ကျွန်တော်တို့ရဲ. ပြီးခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှာ အချို.သောနေရာတွေမှာ လူတစ်ချို.ဟာ လုံခြုံမှု မရှိပဲ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ ကာကွယ်ပြီး ထွက်ရပါတယ် ။ ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးဟာ လမ်းပေါ်ထွက်လာချိန်မှာ ဓါတ်ငွေ့ကာမျက်နှာဖုံးကို တပ်ဆင်ထားပြီး သူ့ရဲ. ကလေးငယ်ကိုလည်း ဓါတ်ငွေ့ကာ လက်တွန်းလှည်းနဲ့ ထည့်ပြီးမှ ထွက်လာတာကို မြင်ရမှာပါ။